Andro: 9 Desambra 2019
Tiorkia Fanohanana for Development ny Malaysia Airlines
Tiorkia Fanohanana for Development ny Malaysia Airlines; Minisitry ny Turhan, minisitry ny fitaterana zokiolona Anthony Loke Siew Fook sy ny delegasiona alohan'ny fihaonana amin'i Malaysia, 2,5 miliara dolara amin'ny fifanakalozana ara-barotra miaraka amin'i Malaysia [More ...]
TCDD sy ireo Orinasa
TCDD sy ireo Orinasa Abdullah Peker, Filohan'ny Sendikan'ny Fitaterana sy Railway, ary fandraisana mpiasa 3,477 mpiasa an-trano miasa ao amin'ny TCDD sy ny Mpandra-miasa aminy (TÜDEMSAŞ, TÜLOMSAŞ, TÜVASAŞ) [More ...]
Fampitandremana avo lenta avy amin'ny TCDD!
Fampitandremana avo lenta avy amin'ny TCDD; Any Adana, ny fanamboarana ny lalamby amin'ny fananganana Karaisalı Bucağı Belemedik 13 dia voalaza fa hanome ny volana desambra. Tao anatin'ny fanambarana an-tsoratra nataon'ny Jeneraly Tale Jeneralin'ny Railway State Tiorka (TCDD). [More ...]
Sokafy ny tsenan'ny Auto ao amin'ny Manisa Tranainy Manisa
Open Auto Market dia haorina ao amin'ny Manisa Old Garage; MANULAŞ, departemanta iray ao amin'ny Kaominin'i Manisa Metropolitan, dia nilaza fa hatsangana ny Garage taloha amin'ny alahady eo anelanelan'ny ora 08.00-17.00. Misokatra hametraka ao amin'ny garazy tranainy [More ...]
Konya Metropolitan Konya hanompo ao anatin'ny Konya Konya Hizmetleri A.Ş. Ireo mpangataka maniry hampihatra dia tsy maintsy ampiharina amin'ny 13 Desambra 2019. Mangataka mpamily fiara fitateram-bahoaka [More ...]
Gebze 7 Toeram-piantsonan'ny fiara mifono tranobe maro dia nanomboka
Asphalt Paving dia nanomboka ho an'ny Gebze 7 Store Park Car Floors; Ny Kocaeli Metropolitan Metropolitan dia manohy miasa mafy amin'ny fanomezana ny fiara fitehirizam-bokatra 7 amin'ny iray amin'ireo làlana mampihomehy indrindra any Gebze. Sampana fanaraha-maso ny trano [More ...]
Fiara IETT fiomanana amin'ny ririnina
Fiara 6 an'arivony 154 mifandraika amin'ny IETT no napetaka tamin'ny kodiarana ririnina izay mifanaraka amin'ny fitsipika. Ireo takelaka dia nosavaina ary ny antifreeze dia nampiana tamin'ny rano wiper. Nopotehina ny rafitra fanavotana amin'ny fiara. Havoa amin'ny rafitra miforitra sy [More ...]
Channel Istanbul valiny avy amin'i Imamoglu hatramin'ny minisitra Turhan: Nofoanan'ny olona ny tetikasa 23 tamin'ny Jona
Channel Istanbul valiny avy amin'i Imamoglu hatramin'ny Minisitry ny Turhan: Nofoanan'ny olona ny tetikasa 23 tamin'ny Jona; Ny Filohampirenena Metropolitan Istanbul (IMM) Ekrem Imamoglu, dia halefa mivantana alohan'ny fivoriana fivorian'ny Antenimiera MHP, Party GOOD ary ny vondrona CHP [More ...]
Nambara ny drafitra stratejika Channel Istanbul
Nambara ny drafitra stratejika Kanal Istanbul; Nanambara ny minisiteran'ny Fitaterana fa mikasa ny hamita ny 2023 isan-jaton'ny tetikasa Kanal Istanbul ataon 60. Ny vidin'ny tetikasa dia TL 75 miliara. Ny fandravana ny mpahay siansa ao amin'ny Ministeran'ny fitaterana [More ...]
Orinasa marika any Rosia
Na dia maro aza ny fitaovam-pitaterana tonga ao an-tsaina rehefa mikasika ny fitaterana, ny fomba fitaterana fahita be dia ny fitaterana an-dalambe amin'ny kamio. Any amin'ny tanànan'ny firenentsika mandritra ny taona maro na kamiao an-trano sy iraisam-pirenena kamiao [More ...]
Mitombo ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina Adapazarı Pendik
Mitombo ny fandaharam-potoanan'ny lamasinina Adapazarı Pendik; Nitombo hatrany ny isan'ny sidina ao amin'ny zotra Adapazarı-İzmit-Pendik, izay misy ny sidina 8 isan'andro, izay nitombo hatrizay. Ny fiaran-dalamby voalohany avy ao Adapazarı dia hatao eo anelanelan'ny Adapazarı sy Pendik. [More ...]
Ireo tarika akademika ao amin'ny Oniversite Balıkesir University Rectorate sy ny lahatsoratra mifandraika amin'ny Lalàna No. 2547 sy 09.11.2018 daty ary 30590 navoaka tao amin'ny Gazety ofisialy "Staff akademika ankoatry ny fanadinana ivon'ny mpiasa akademika izay azo ampiharina. [More ...]
Ny Oniversite Pamukkale dia handray vaovao tsy tapaka
Ny diplaoman'ny sekoly ambaratonga fototra Pamukkale University 45 dia namoaka fanambarana ofisialy tamin'ny datin'ny Desambra 9 tamin'ny pejin'ny asa ISKUR mba hitadiavana famerenana maharitra. Kaody fampandrenesana ampiharina amin'ny Internet amin'ny dokambarotra navoakan'ny oniversite [More ...]
Fampidirana ho an'ireo vondron'olona manaraka ny oniversite ao amin'ny Oniversite Burdur Mehmet Akif Ersoy miaraka amin'ny Fandinihana foibe amin'ny fanendrena olona ho an'ny akademika hafa ankoatry ny Staff Akademia, lahatsoratra 2547 ao amin'ny Lalànan'ny fampianarana ambony kokoa 31 [More ...]